Galmudug oo sheegtay in ay go’doomiyeen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay ku jiraan Ajaaniib – STAR FM SOMALIA
Galmudug oo sheegtay in ay go’doomiyeen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay ku jiraan Ajaaniib
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay go’doomiyeen dagaalyahano katirsan Xarakada Al-Shabaab oo dhawaan dhinaca Puntland kasoo galay deegaanada hoostaga Maamulka Galmudug.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan (Mesagaway)ayaa sheegay in ciidamada maamulkooda ay go’doomiyeen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo ku sugan deegaano hoostaga maamulkooda.
Waxa uu sheegay Wasiirka in Ciidamada maamulka Galmudug ay howlgalo kawadaan deegaanada Galhagoog, Dinooda, Af-Barwaaqo iyo Towfiiq, halkaas uu sheegay in ay ku sugan yihiin dagalayahano firxad oo katirsan Al-Shabaab.
Wasiirka Warfaafinta ayaa tilmaamay in dhawaan ay soo ajfarayaan howlgalka ka dhanka ah dagaalyahanada AL-Shabaab ee kasocda deeganao maamulkooda gacanta ku hayo, waxa uuna intaa raaciyay in Shabaabka ay hareereeyeen ay ku jiraan dagaalyahano Ajaaniib ah.
Mr Masagawaay ayaa ugu dambeyn sheegay in dagaaladii ay la galeen Al-Shabaab kaga dileen in ka badan 11-dagalayahan sidoo kale ay nolosha kusoo qabteen 25-kale oo qaarkood ay yihiin dhaawac.
Deegaano katirsan maamulka Galmudug, waxaa dhawana soo gaaray dagaalyahano katirsan AL-Shabaab oo kasoo firxaday dhinaca Puntland ay dhawaan ku gaareen doonyo, waxaana dagaalyahanadan ay dagaalo adag kala kulmeen maamulada Puntland iyo Galmudug.
Wasiirka Difaaca Soomaaliya oo kaga qeyb galay dalka Masar shirka dalalka Saaxil iyo Saxaraha